वडा अध्यक्ष साहद्वारा गरिव विपन्न परिवारलाई छठ पर्व पुजाका लागि समाग्री सहयोग – Shirish News
वडा अध्यक्ष साहद्वारा गरिव विपन्न परिवारलाई छठ पर्व पुजाका लागि समाग्री सहयोग
वडा अध्यक्ष साहको सहयोग पाएपछि गरिव विपन्न परिवारहरुद्वारा खुसी व्यक्त
धनुषा। एक त कोरोनाको कहर त्यस माथी लकडाउन र बेरोजगारी । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने दलित, गरिवहरुको लागि कहाली लाग्दो पिडा । त्यस माथी अव श्रद्धा र आस्था संग जुडेको चाड पर्व । गरिवहरुको लागि यो पर्व भन्दा पनि पिडा नै हो । तर सहयोगी हातको पनि कमी भने छैन ।
लकडाउन र बेरोजगारीका कारण पर्व कसरी मनाउने भने चिन्ता र पिडा गरिव विपन्नहरुमा स्वभाविक हो । झन त्यसमा पनि आस्था, श्रद्धा र भाकल गरि गरिने छठ पर्व हुने खाने देखि निमुखाहरुको लागि पनि उतिकै महत्वपुर्ण । यस्तो अवस्थामा चाड पर्व मनाउन धौ धौ परिरहेकै वेला स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु सहयोगी हात बनेर आउन थालेका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सत्रुधन साहले आफनो वडाका सवै गरिव विपन्नहरुलाई छठ पर्व मनाउन पुजा समाग्रीको जोहो गरि दिएका छन् । घर घर पुगेर छठ पुजा हुन्छ भने कुनै समस्या छ ? छ भने हामी सहयोग गर्छौ भन्दै तथ्याङ्क संकलन गरि गरिव विपन्न र अभाव भएका जो सुकैलाई पनि पुजा समाग्री वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष साहले बताए ।
छठमा ठेकुवा बनाउन आवयश्क पर्ने गहुँ करिव ५ किलो, एउटा सुतीको साडी, नरिवल र अगरवती सहितको प्याकेज वडा अध्यक्ष साहले करिव साढे तिन सय जनालाई पुजा समाग्री वितरण गरेको छ । धेरैलाई वडाको रकमवाट सहयोग गरेको आशंका हुन सक्ला तर साहले आफुले व्यक्तिगत खर्चमा सो समानहरु वितरण गरेको बताए । राजनिति भन्दा हटेर यो कार्य गरेको उनको भनाई छ ।
छठ मनाउन केहि भएपनि राहत भएपछि विपन्न परिवार खुसी देखिन्छन । घर घर पुगेर समस्या बुझेको र सहयोग भएको भन्दै उनीहरुले स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु समाजका लागि उतरदायी हुनुपर्ने उदाहरण यो सहयोग रहेको बताउछन् । छठ पुजा गर्छु भन्ने भाकल गरेकाहरुले आफनो हैसियतले नसके सहयोग वा मागेर समेत छठपुजा गर्दा उतिकै पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास छ । वडा अध्यक्ष साह लकडाउनका वेला पनि आफनो वडामा करिव महिनौ सम्म निशुल्क भोजन शिविर चलाएर गरिव विपन्नहरुलाई खाना खुवाएका थिए ।
तिन तहको सरकार र जनप्रतिनिधीहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लागि रहेका बेला वडा अध्यक्ष साहको यो कदमले जनप्रतिनिधी समाज प्रति उतरदायी छन भने कुराको पनि शंकेत गर्छ ।